सीमाङ्कनमा चाँसो राख्ने भारतीय नेतासामु सैद्धान्तिक सहमतिको सूचना मात्रै चुहाएका छौं : दाहाल
२०७२ माघ १८ सोमबार, काठमाडौं । एकिकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतीय नेताहरुले सीमाङकनमा चाँसो देखाएको बताएका छन् । पार्टी मूख्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा दाहालले भारतीय नेताहरुले नेपालको राज्य पुनःसंरचनाबारे सिमाङ्कनमा चाँसो देखाएको तर, आफुहरुले सबै दलहरुबीच भएको सैद्धान्तिक सहमतिबारे मात्रै भारतीय नेताहरुलाई जानकारी गराएको बताए । यद्यपि, दलहरु र सरकारले गरेका अधिकांश निर्णयबारे भारतलाई पूर्ण ज्ञान छ । दाहालले भने, & ... बाँकी अंश»
जनकपुर तनावग्रस्त : मोर्चा कार्यकर्ता कांग्रेस नेता निधिको घरमा छिरेर आगजनी गरे
२०७२ माघ १८ सोमबार, धनुषा । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले जनकपुरको मिल्स एरियामा रहेको कांग्रेस सहमहामन्त्री विमलेन्द्र निधिको घरमा छिरेर आगजनी गरेका छन् । मोर्चा कार्यकर्ताले निधिको घरको कम्पाउण्डमा रहेको मोटरसाइकल र गाडी राख्ने ग्यारेजमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका हुन् । आगजनीबाट ज ३ प ९४३८ जम्बरको मोटरसाइकल जलेको छ । ग्यारेजको आगो भने प्रहरीले निभाएको छ । निधिको घरमा आगजनीपछि मोर्चा कार्यकर्ता र प्रहरीबीच तनाव भएको छ । मोर्चा कार् ... बाँकी अंश»
मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेता पटनामा, लालु र नितिशसंग गुहार माग्दै
२०७२ माघ १८ सोमबार, काठमाडौं । मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरु आन्दोलन बलियो बनाउन सहयोग माग्दै पटना पुगेका छन् । पटना पुगेका उनीहरुले राजनीतिक भेटघाटलाई तीब्रता दिएका छन् । मोर्चाका नेताहरुले अपरान्ह ४ बजे पटनामा महागठबन्धन गरेका राष्ट्रिय जनतादलका अध्यक्ष लालुप्रसाद यादव र जनतादल युनाईटेडका नितिश कुमारसंग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको सद्भावना सहमहामन्त्री देवेन्द्र यादवले हाम्राकुरालाई जानकारी दिए । आइतबार मुजफ्फरपु ... बाँकी अंश»
नुवाकोट काँग्रेसमा केसी बन्धु, महत बन्धु र तामाङको भिडन्त हेर्न लायक
२०७२ माघ १८ सोमबार, नुवाकोट। नेपाली कांग्रेसको आउँदो १३ औँ महाधिवेशनको तयारीस्वरुप शुक्रवार नुवाकोटमा भएको विभिन्न गाउँ, नगर र वडा अधिवेशन सकिएपछि क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशनको तयारी व्यापक छ। लामो समयदेखि केसी परिवार महत परिवारबीच जेलिएको राजनीति यो पटक पनि अछुतो छैन। पार्टी सभापति तथा सांसद जगदिशनरसिंह केसी र पार्टी सचिव रमेश महत दुई परस्पर विरोधी घरानाबाट छन्। उनीहरुले नैस्थानिय राजनीतिको नेतृत्व गर्छन। तर यो पटक महत पक्षबाट वहालवाला सचिव रमेश महत नै केसी पक्ष ... बाँकी अंश»
यू–१९ विश्वकप : नेपालको पहिलो हार, समूहको अन्तिम खेलमा भारतसंग ७ विकेटले पराजित
२०७२ माघ १८ सोमबार, काठमाडौं । बंगलादेशमा जारी आइसीसी यू–१९ विश्वकप क्रिकेटमा नेपाल पहिलो हार बेहोरेको छ । समूहका अन्य खेलमा अपराजित नेपाल भारतसंग ७ विकेटले पराजि भएको हो । शेर बंगला नेशनल स्टेडियममा टस जितेर फिल्डिङ रोजेको भारतले पाएको १ सय ७० रनको चुनौती १८.१ ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा १ सय ७५ रन बनाएपछी नेपाल पराजित भयो । भारत समूह विजेता बन्दै क्वार्टरफाइनल पुगेको छ भने, समूह उपविजेता बनेको नेपाल समेत क्वार्टरफाइनलमा स्थान पक्का गरिसकेको छ । यी दुवै टोली आपस ... बाँकी अंश»
यू–१९ विश्वकप : भारतसामु नेपालको १ सय ७० रनको चुनौती
२०७२ माघ १८ सोमबार, काठमाडौं । बंगलादेशमा जारी आइसीसी यू–१९ विश्वकप क्रिकेटको समूह चरण अन्तिम खेलमा नेपालले भारत सामु १ सय ७० रनको चुनौती पेश गरेको छ । मिरपुरमा टस हारेर पहिले व्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ४८ ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १६९ रनको योफल बनायो । नेपालका लागि सन्दिप सुनार, आरिफ शेख, राजविर सिंह र प्रेम तामाङले सम्मानजनक प्रदर्शन गरे । प्रेमले नेपालका लागि उत्कृष्ठ प्रदर्शन गरे । उनले १ छक्का २ चौकाको मद्दतले अविजित २९ रन बनाए । ओपनर सन्दिपले सर्व ... बाँकी अंश»
नेताप्रति बफादार हुने परिपाटीबारे के भन्छन् काँग्रेस नेता ?
२०७२ माघ १८ सोमबार, काठमाडौं । काँग्रेस कार्यकर्ताहरु पार्टी प्रति भन्दा नेता प्रति बफादार भएको भनी एक सर्वेक्षणले देखाएको नतिजा प्रति काँग्रेस नेताहरुले गंभिर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । हाम्राकुराबाट केहीदिन पहिले सार्वजनिक भएको सर्वेक्षणको नतिजाबाट देखिएको नेता प्रति बफादार हुने प्रबृत्तिलाई काँग्रेस नेताहरुले पार्टीका लागि कालो बादलको रुपमा लिएका छन् । प्रस्तुत छ केही नेताहरुको प्रतिक्रिया ः मानबहादुर विश्वकर्मा काँग्रेसको निति तथा क ... बाँकी अंश»
देउवा समुहकै गुटवन्दीको शिकार भएर वडामै पराजित बोहरा नगरमा विजयी
२०७२ माघ १८ सोमबार, महेन्द्रनगर। जिल्ला सभापतिका आकांक्षी समेत रहेका काँग्रेस नेता हरिप्रसाद बोहरा बेदकोट नगरपालिकाभित्रको वडा अधिवेशनमा पराजित भएपनि बेदकोट नगरपालिकाकै नगर सभापतिमा विजयी भएका छन्। निकटतम प्रतिद्वन्दी राजेन्द्रप्रसाद भट्टलाई २ सय २१ मतको भारी अन्तरले पराजित गर्दै हरिप्रसाद बोहरा नगर सभापतिमा विजयी भएका हुन्। नगर सभापतिमा विजयी हरिप्रसाद बोहराले २ सय ८८ मत र राजेन्द्रप्रसाद भट्टले ६७ मत पाएका छन्। वडा नम्बर–७ को नगर अधिवेशनबाट क्षेत्र ... बाँकी अंश»
कास्की कांग्रेस अधिवेशनः १७ वर्ष नेतृत्व गरेका शुक्रराज फेरि हौसिय!
२०७२ माघ १८ सोमबार, पोखरा। नेपाली कांग्रेसको माघ २२ गते क्षेत्रीय अधिवेशन र २५ गते हुने जिल्ला अधिवेशनका लागि नेताहरुको दौडाहा तीव्र बनेको छ। क्षेत्रीय अधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत निर्वाचित हुने भएकाले त्यसका लागि केन्द्रीय तहका नेताहरु समेत आ–आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो र आफ्ना समर्थकको विजय यात्राको रणनीति तयार गर्न व्यस्त छन्। कास्की कांग्रेसको नेतृत्व लिन चाहना गर्नेहरुको संख्या आधा दर्जन बढी छ। जसमध्ये वर्तमान सभापति यज्ञबहादुर भन्दा अघि ... बाँकी अंश»
काँग्रेस अधिवेशनः किर्तीपुरमा सुवोधको अनुहारमा गगन देखिएपछि
२०७२ माघ १७ आइतबार, काठमाडौं। काठमाडौं काँग्रेसको अधिवेशन हुनु अघी काठमाडौंको विभिन्न नगरका अधिवेशनहरु हेर्न लायक भएका छन्। यि अधिवेशनहरुमा जोडिने नेताहरुका कारण पनि काठमाडौं काँग्रेसको अधिवेशन चर्चामा पनि रहेको छ। काठमाडौंको किर्तिपुर नगरपालिकाको काँग्रेसको नगर अधिवेशन यतिखेर धेरैको लागि प्रतिक्षाको विषय भएको छ। हुनत यसअघी काँग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग निकट रहेका कृष्णमान डंगोलले नगर सभापतिमा जितेपनि यसपटक उनको लागि नगर सभापतिको पद फलामे च ... बाँकी अंश»
देब्रे आँखाको ज्योती गुमेका राजेन्द्र महतो भारतको मुजफ्फरमा देखिएपछि
२०७२ माघ १७ आइतबार, काठमाडौं । विराटनगरको जोगबनी नाकामा धर्ना बसेकै बेला प्रहरीसंगको झडपमा घाइते भएपछि दिल्लीमा उपचार गराएका सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको देब्रे आँखाको ज्योती गुमेको बताइएको छ । महतोका भतिजा उपेन्द्र महतोले चेक जाँचका क्रममा अध्यक्ष महतोको बाँया आँखाको जेति गुमेको रिपोर्ट आएको बताए । उपेन्द्रले भनेका छन्, ‘जोगबनी नाकामा धर्ना दिन गएका बेला महतोलाई प्रहरीले टाउकोमा लाठी प्रहार गरेका थिए, जसको असरले आँखामा समस्या भएको र उच्च रक्तचाप ... बाँकी अंश»
कांग्रेस सांसदका घर अगाडी प्रदर्शन, झडपमा ५ प्रदर्शनकारी र ३ प्रहरी घाइते
२०७२ माघ १७ आइतबार, धनुषा। मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच जनकपुरमा फेरि झडप भएको छ। झडपमा पाँच प्रदर्शनकारी र ३ प्रहरी घाइते भएका छन्। घाइतेको जनकपुर स्थित अञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइने प्रहरी स्थानीय जानकी मेडिकलमा उपचारपछि फर्किएका छन। ... बाँकी अंश»
भारतविरुद्ध गर्जेलान् त नेपाली युवा ? ‘१५ वर्षअघि सुपर लिगमा हारेको बदला लिने अवसर’
२०७२ माघ १७ आइतबार, काठमाडौं । १५ वर्षपछि उमेर समूहको क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो चरणमा उक्लिएको नेपाल बंगलादेशमा जारी यू–१९ विश्वकपको लिग चरणको अन्तिम खेल सोमबार बलियो प्रतिद्वन्द्वी भारतसंग खेल्दै छ । जारी प्रतियोगितामा अहिले सम्म अपराजित नेपाल भारतविरुद्ध संयमित प्रदर्शनका साथ जितको लक्ष्य लिएर मैदान उत्रने छ । ढाकामा सोमबार बिहान पौने ९ बजे हुने खेलमा नेपाल उच्च मनोवलका साथ खेल्ने धेरैको अपेक्षा छ । एक खेल अगावै क्वार्टरफाइनलमा पुगेका यी दुई टोलीबीच ... बाँकी अंश»
रंगेली सामान्य बन्दैः रंगेली काँग्रेसमा जगरनाथ प्यानलको वर्चश्व
२०७२ माघ १७ आइतबार, मोरंग। मधेश आन्दोलनमा अशान्त भएको रंगेली सामान्यतर्फ उन्मुख भएको छ। तराई मधेशका कतिपवय ठाउँमा अन्य राजनीतिक दलका कार्यक्रम गर्न नदिएको मधेशी मोर्चा समेत काँग्रेसका स्थानिय अधिवेशनहरुमा नरम बनेको छ। यसैबीच मोरङको रंगेलीमा नेपाली काँग्रेस रंगेली नगर चुनाब सम्पन्न भएको छ। नगर अधिवेशनमा जगरनाथ मण्डल विजयी भएका छन्। कडा प्रतिस्पर्धाको बिचमा भएको रंगेली नगर अधिवेशनमा पुर्व नगरसभापति रामेश्वर यादवलाई १ सय ५६ मतको फराकिलो अन्तरले हराउदै मण्डल विजय ... बाँकी अंश»
कास्की काँग्रेसको नेतृत्व लिन यि भए तयार; समिकरण यस्तो बन्दैछ
२०७२ माघ १७ आइतबार, कास्की। नेपाली काग्रेसको १३ औ महाधिवेसनको लागि प्रारम्भीक चरणको चुनाव सकीएको छ। नेपाली काग्रेसको बिधान अनुसार हरेक गाउँ बिकास समिति, नगर वडाबाट क्षेत्रिय प्रतिनिधि चयन भई क्षेत्र र जिल्लाको लागि नेतृत्वको लागि दावी गर्ने बाटो खुलेको छ। यसले नेपाली काँग्रेस कास्कीको १३ औं अधिवेशनको सरगर्मी बढेको छ। कास्कीमा नेपाली काँग्रेसको १३ औ महाधिबेसनमा जिल्ला सभापतिमा आकांक्षा राख्ने काग्रेस नेता शुक्रराज शर्मा, नेता खेमराज पौडेल, पुर्व सह सभापति श ... बाँकी अंश»
ओलीको लहरै छिमेक भ्रमण : ‘पहिले चीन जान सक्ने’
२०७२ माघ १७ आइतबार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक विदेश भ्रमण अन्योल–अन्योलमै रहस्यपूर्ण बन्दै गएको छ । यसअघि, फ्रेबु्रअरी दोस्रो हप्ताभित्रै भारतबाट पहिलो औपचारिक भ्रमण थालनी हुने भनिएकामा, अब कहीले हुने भन्ने अन्योल बढेको छ । त्यति मात्र नभई पछिल्लो समय फेरि पहिले भारत जाने कि चीन भन्ने विषय उद्घाटन भएको छ । यसअघि, पहिले भारत जाने पक्का भइसकेको बताएका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले समेत भाषा फेरेका छन् । थापाले पछिल्लो समय य ... बाँकी अंश»
बहत्तर जिल्लामा काँग्रेसको स्थानीय तहका अधिवेशन सम्पन्न
२०७२ माघ १७ आइतबार, काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको आसन्न १३ औँ महाधिवेशनका लागि सुरु भएको निर्वाचन प्रक्रिया ७२ जिल्लाका लगभग सबै गाउँ, नगर वडा र नगर अधिवेशनमा शान्तिपूर्ण र उत्साहका साथ सम्पन्न भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेसले मुलुकभर सबै गाविसमा र नगरपालिकाका वडामा यही माघ १५ गतेका लागि प्रारम्भिक तहको निर्वाचन तालिका तय गरेको भए पनि केही स्थानमा भने निर्वाचन हुन बाँकी छ । क्रियाशील सदस्यता विवादले ढिलाइ भएका, पूर्वी तराई र हिमाली ... बाँकी अंश»
काँग्रेस अधिवेशनः दाङमा खुमवहादुरको एकलौटी
२०७२ माघ १७ आइतबार, तुलसीपुर । नेपाली कांग्रेस घोराही नगर समितिको सभापतिमा काँग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का पक्षधर मानिने यूवा व्यवसायि मनोज बुढाथोकी निर्वाचित भएका छन् । शनिवार भएको निर्वाचनमा बुढाथोकीले रमेश पाण्डेय र भरतमणि शर्मालाई पछाडी पार्दै विजय हासिल गरेका हुन । उनले निकटतम प्रतिद्धनन्दी पाण्डेलाई ४८ मत अन्तरले पराजित गरेका हुन । बुढाथोकीलाई ३ सय ८ मत प्राप्त भएको थियो भने पाण्डेलाई २ सय ६० र शर्मालाई १ सय २ मत प्राप्त भएको थियो । घोराही नगरमा काँग्रेसका कु ... बाँकी अंश»
कञ्चनपुरमा काँग्रेसको सकसः वडामा पराजित बोहरालाई नगर हुँदै पार्टी सभापति बनाउने तयारी
२०७२ माघ १७ आइतबार, महेन्द्रनगर। नगर वडा अधिवेशनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि पदमा पराजित काँग्रेस नेता हरिप्रसाद बोहराले बेदकोट नगरपालिकाको अधिवेशनबाट नगर सभापति हुँदै क्षेत्रीय अधिवेशनमा सहभागी हुने तयारी गरेका छन्। नेपाली काँग्रेस कञ्चनपुरको जिल्ला सभापतिका आकांक्षी हरिप्रसाद बोहरा वडामै पराजित भएपछि नगर क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यले नगर सभापति हुँदै जिल्लासम्म पुग्न दबाब दिएका छन्। जारी महाधिवेशनमा जिल्लास्तरमा प्रभावशाली मानिएका नेता हरिप्रसाद बोहरा ... बाँकी अंश»
देउवाको गढमै संस्थापन पक्षको प्यानलै विजयी
२०७२ माघ १७ आइतबार, कैलाली । सुदुरपश्चिमलाई काँग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवाको गढ मानिन्छ । तर कैलालीको एउटा नगरअधिवेशनमा देउवा पक्ष पुरै फालिएर संस्थापन पक्षको प्यानलै विजयी भएको छ । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको अधिवेशनबाट काग्रेस नगर सभापतिमा रामबहादुर बिष्ट सहित पुरै प्यानल निर्बाचित भएको छ । विष्ट नेतृत्वको प्यानलाई संस्थापन पक्षको रुपमा लिईन्छ । निर्बाचित भएका नगर सभापति बिष्टले १ सय ६४ मत ल्याएका छन् भने उनका प्रतिद्धन्दी लवबहादुर शाह ... बाँकी अंश»